ရေးသားသူ သုခုမလေဒီ 22 December 2010 အမျိုးအစား မျှဝေခြင်း 11 ယောက်ဆွေးနွေးချက်
အဲ့ဒီလိုပဲ အယူအဆတစ်ခုဟာရှေ့နောက်ဆီလျော်ညီညွတ်နေပေမဲ့ လက်တွေ့ဘ၀မှာ မမှန်နှိင်မဖြစ်နှိင်တာမျိုးရှိတတ်ပါတယ်။
တွေ့ဆုံချိန်မှာ မိုးရွာချင်ရွာနေမယ်၊ နေသာချင်သာနေလိမ့်မယ်။
ဒါပေမယ့် ရင်ထဲမှာ စိတ်လှုပ်ရှားမှု၊ အပျော်တွေ ကိုယ်စီရှိနေကြတယ်။
ဒီလို ကြီးမားကျယ်ပြန့်တဲ့ နေရာမှာ အချင်းချင်းတွေ့ဆုံဖို့ ဆိုတာကို တစ်ခါမှ မတွေးခဲ့မိဘူး။
လူတစ်ယောက်ကို သိဖို့လွယ်ပေမယ့် တွေ့ဆုံဖို့ဆိုတာ ခက်ခဲလွန်းတယ်။
တစ်နေရာစီမှာရှိနေကြတဲ့ အစက်လေး နှစ်စက်အတွက် တွေ့ဆုံဖို့ဆိုတာ မလွယ်ကူခဲ့ပါဘူး။
လူတွေ သိန်း၊ သန်းပေါင်းများစွာ စုရုံးနေတဲ့ ဂြိင်္ုလ်ပြာကြီးထဲမှာ..ဘာကြောင့် ငါတို့တွေ့ဆုံခဲ့ကြသလဲ?
ရေသူမလေး ရေပြင်ပေါ်ဘွားခနဲ့ ပေါ်လာတဲ့အချိန် မင်းသားရဲ့သင်္ဘောလည်းအဲဒီနေရာကို ဖြတ်သွားတဲ့အချိန်ဖြစ်နေတယ်။
တောထဲမှာ မင်းသားလှည့်လည်နေတဲ့အချိန် မျှော်လင့်မထားဘဲ စနှိုးဝိုက်နဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့တယ်။
တွေ့ဆုံခြင်းက ဒီလောက်ပဲ တိုက်ဆိုက်နိုင်ခဲ့သလား?
တစ်ချိန်တည်း၊ တစ်နေရာတည်းမှာ အချင်းချင်း တွေ့မြင်ကြပြီဆိုရင် ....
ဂျပန်ကား "Now and Then" က ဇာတ်လိုက်တွေက ဇာတ်လမ်းရဲ့နောက်ဆုံးမှာ..
ဖဲကြိုးရှည်တွေ လွတ်ပြီး ဒီအချိန်၊ ဒီနေရာမှာ ဒီလူတွေရှိခဲ့ကြတယ်ဆိုတာကိုအထိမ်းအမှတ် လုပ်ခဲ့ကြတယ်။
ဒါပေမယ့် လူအများရဲ့ တွေ့ဆုံခြင်းမှာ..နှုတ်ဆက်ခြင်း၊ အထိမ်းအမှတ်ပြုခြင်းတွေ မရှိခဲ့ကြဘူး။
တစ်ချို့ရဲ့တွေ့ဆုံခြင်းက မျဉ်းကြားမှာလမ်းဖြတ်ကူးသလိုပဲ ပုခုံးချင်းတိုက် မျက်နှာလွှဲခဲ့ကြတယ်။
နှုတ်ဆက်ဖို့ဆိုတာဝေးလို့ သူတို့အနားမှာ ပုခုံးချင်း ပွတ်တိုက်သွားတဲ့ လေစိမ်းတွေသာ ကျန်ရစ်ခဲ့တယ်။
တစ်ခါတလေမှာ ဒီလူ၊ ဒီလူနဲ့ ဒီနေရာမှာ အရမ်းတွေ့ချင်မိတယ်။
တစ်ခါလောက်ဒီလူ၊ ဒီလူနဲ့ ထပ်ဆုံချင်ပေမယ့် တွေ့ဆုံခြင်းက ဝေး,ဝေးနေခဲ့တယ်။
ဒါကြောင့် အချင်းချင်း တွေ့ဆုံချိန်မှာ တန်ဖိုးထားကြပြီး နွေးထွေးမှု၊ အကြင်နာတွေ ပိုပါစေ။
fw mail ထဲကနေ ပြန်လည်မျှဝေခြင်းပါ...
ရေးသားသူ သုခုမလေဒီ 09 December 2010 အမျိုးအစား အမှတ်တရ 8 ယောက်ဆွေးနွေးချက်
ဒီနေ့ ဒီဇင်ဘာ၁၀ရက်နေ့က အဝေးရောက်နေတဲ့ ကျွန်မညီမမွေးနေ့ပါ..
ဒီနှစ်ဟာ သူ့ရဲ့မွေးနေ့ရက်တိုက်ဆိုင်တဲ့နေ့ပေါ့.. သူကသောကြာနေ့ဖွားသမီး.
ဒီအတောအတွင်း ကျွန်မ လက်အခြေအနေမကောင်းလို့ စာမရိုက်နိုင်တာကြောင့် ပိုစ့်အသစ်တွေလည်း မတင်ဖြစ်ခဲ့ဘူး။
ဒီကြားထဲ အမေနဲ့ညီမတစ်ယောက်က ရိပ်သာခဏ၀င်တာရယ်..ဘာရယ်နဲ့ဆိုတော့ အိမ်မှာက
အသက်ကြီးတဲ့အဖွားနဲ့ ကျွန်မသာရှိတယ်၊ ကူဖော်လောင်ဖက်တော့ ရှိတာပေါ့..
အဲဒီအချိန်အတွင်း ၁၀နှစ်လောက်ဝေးကွာသွားတဲ့ မောင်ဖြစ်သူမိသားစုက ပြန်ရောက်လာကြ.. အဖွားက သိပ်ကျန်းကျန်းမာမာမဟုတ်တော့..
၃ရက်နေ့က ၀မ်းကွဲမောင်လေး မိသားစုက ဖွားဖွားကိုလာကန်တော့ကြတယ်။ မြေးအဖွားတွေ စကားဖောင်ဖွဲ့လို့ပေါ့….။
၅ရက်နေ့ နေ့လည်ဖက်ရောက်တော့ ဖွားဖွားက ချွဲကြပ်လာပြီး စကားမပြောတော့ဘူး။
ဘကြီးတစ်ယောက်က လာကြည့်ပေးတယ်။ အနီးအဝေးဆွေမျိုးတွေအားလုံး အကြောင်းကြားထားဖို့..
၆ရက်နေ့ မနက်စောစော ၃နာရီမထိုးခင်မှာပဲ ဖွားဖွားရဲ့ ရုပ်နာမ်ခန္ဓာချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်။
နေ့ရက်ဆက်တိုက် ဧည့်ခံ၊ ဟိုလုပ်ပေး ဒီလုပ်ပေး။
၁၀ရက်နေ့ ညီမမွေးနေ့ကိုတောင် အသေအချာ့ ဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်တော့ဘူးပေါ့..။
ပထမတော့ ကျွန်မညီမမွေးနေ့ကို သူစားချင်တဲ့ မြန်မာအချဉ်ထုတ်၊ လဖက်တို့ကိုပို့ပေးမယ်ဆိုပြီး စာတိုက်ကို အစားအစာပို့ရမရ မေးမြန်းစုံစမ်းခဲ့သေးတယ်..။
ခုတော့..ဘာကိုမှမလုပ်ပေးနိုင်လို့ အဲဒီအတွက် စိတ်တော့မကောင်းဘူးပေါ့..
၁၂ရက်နေ့က ဖွားဖွားရက်လည် ရှိသေးတာကိုး..
မွေးနေ့ရှင်ကိုယ်တိုင်ကလည်း စိတ်မတည်ငြိမ်တော့ဘူး.. အဖွားအတွက် သူတတ်နိုင်သလောက် လုပ်ချင်တာတွေလုပ်ခိုင်း လှူခိုင်းနဲ့ပါပဲ..
ဖုန်းခဈေးကြီးလို့ ဖုန်းဆက်ဖို့ခဲယဉ်းတဲ့သူက တစ်နေ့ကို ဖုန်း သုံးလေးခါဆက်လေရဲ့..
ဒါနဲ့ သူ့ဆန္ဒကိုပဲ မဖြစ်ဖြစ်အောင် ဖြည့်ဆည်းပေးနေမိတယ်.
ဖွားဖွားက အသက်ရှည်ပြီး နောက်ဆုံးထွက်သက်မှာလည်း ညင်ညင်သာသာဖြစ်သွားလို့ ကျွန်မတော့ ဖြေသာပါတယ်. နောက်ဆုံးအချိန်လေးမှာ…ဖွားဖွားအတွက် အကောင်းဆုံးဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့လို့လည်း ကျေနပ်ရတာပါပဲ။
ဖွားဖွားလည်း ကောင်းရာသုဂတိလားပါစေလို့ ဆန္ဒပြုရင်း..
ကျွန်မ ညီမရဲ့မွေးနေ့ကိုပါ ဒီကနေပဲ တစ်ခါတည်းတိတ်တဆိတ် ဆုတောင်းပေးနေမိတယ်။
လူတစ်ယောက် မွေးဖွားလိုက်ခြင်းဟာ ၀မ်းမြောက်ခြင်းဖြစ်ပြီး၊ လူတစ်ယောက်သေဆုံးခြင်းကတော့ ၀မ်းနည်းခြင်းဖြစ်တယ်လို့ ခံယူကြတယ်လေ။
လူ့ဘ၀ဆိုတာ မွေးဖွားခြင်းနဲ့စပြီး. သေဆုံးခြင်းမှာ အဆုံးသတ်ကြရမှာပါပဲ…။
ဒါကြောင့် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် နေထိုင်နိုင်ကြဖို့၊ အကောင်းဆုံးတွေ လုပ်ဆောင်သွားကြဖို့ လိုပါတယ်။ အလင်းထဲရောက်နေကြသူတို့အဖို့ အလင်းရှိရာကိုသာ သွားဖို့ကြိုးစားကြရမှာမယ် ဆိုတာကို သဘောပေါက်မိရင်း....။
ရေးသားသူ သုခုမလေဒီ 17 November 2010 အမျိုးအစား သိမှတ်ဖွယ်ရာ 10 ယောက်ဆွေးနွေးချက်
ရေးသားသူ သုခုမလေဒီ 03 November 2010 အမျိုးအစား ရောက်တတ်ရာရာ3ယောက်ဆွေးနွေးချက်
ရေးသားသူ သုခုမလေဒီ 22 October 2010 အမျိုးအစား အမှတ်တရ 10 ယောက်ဆွေးနွေးချက်
ရေးသားသူ သုခုမလေဒီ 08 October 2010 အမျိုးအစား အတိုအထွာစာစုများ 13 ယောက်ဆွေးနွေးချက်
ရေးသားသူ သုခုမလေဒီ 24 September 2010 အမျိုးအစား ဘာသာရေးဆိုင်ရာ 12 ယောက်ဆွေးနွေးချက်